Phone-Camera | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label Phone-Camera. Show all posts
ညဖက် အမှောင်ထဲမှာ ဓါတ်ပုံ ရိုက်နိုင်တဲ့ Night Vision Cam Pro v1.24 Apk
အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Camera Application လေး ကတော့ ညဖက် အမှောင်ထဲ မှာတောင် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူနိုင် တဲ့ Application လေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။
စုံထောက် ကားတွေ စစ်ကား တွေမှာ ညဖက် စစ်ဆင်ရေးတွေ ကျ ရင် အသုံးပြုတဲ့ ညဖက် ကြည့်တဲ့ မှန်ဘီလူး ပုံစံမျိုးမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ရိုက်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် ကင်မရာတွေ ထက် တမျိုး ဆန်းနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာ အနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shoot တွေ ပြထား ပါတယ်။
The best Night Vision camera for your Android phone or tablet.
Want to see in the dark? Now you can with this free and fun camera app.
Unlike others, this Night Vision camera app comes withaThermal Vision filter!
Take photos or record videos in the dark or low light environments and share them with your friends on popular social networks like Whatsapp, Instagram, Viber, Tango, BBM, and more!
Updated : January 4, 2014
Size : 3.0M
Current Version : 4.26
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼
Original link - www.pyaephyo.com
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, June 04, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Phone-Camera
Camera FV-5 v2.55 APK
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင် ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ပေး လိုက်ကတော့ Video တွေကို Effect အမိုက်စား တွေနဲ့ ရိုက်နိုင်ပြီး ပုံတွေ ကို ရုပ် ကြည်လင် စွာရိုက်ကူး နိုင်တဲ့ Camera FV-5 ဆိုတဲ့ application လေးကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
Video ၀ါသနာ ပါသူများ အတွက်လည်း ရိုက်နိုင်တဲ့ Camera Fv-5 လေးပါ။ Video ရိုက်ကူး ရာမှာလည်း အလင်း အမှောင်နဲ့ Color များကို လိုအပ် သလို စိတ်ကြိုက် ချိန်ညှိ နိုင်ပါတယ်။
Android OS 2.2နှင့် အထက် ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
File Size ကလည်း 3.5MB လေးပဲ ရှိတာမို့ လိုအပ်ရင် သုံးနိုင်ဖို့ အတွက် ဒေါင်း ယူထား စေချင်ပါတယ်။
If you findabug using the application, PLEASE, visit the web page http://www.camerafv5.com/ or write to support@camerafv5.com with your phone model name and the description of the problem, before writinganegative comment. Customer satisfaction is our priority, and we will do our best to fix the issues as soon as possible!
- New: new app design withaless cluttered UI, redesigned icons, smooth animations and dynamic information on the screen based on the current context.
- New: redesigned virtual two-stage shutter button. Now you can press and hold to focus and lock focus position, and release to capture (or drag away to cancel).
- New: choice of3different shutter sounds.
Size : 4.2M
Current Version : 2.52
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 27, 2015 No comments:
ဒီတစ်ခါ တင်ပေးမှာ ကတော့ မြန်မာ လူမျိုးများ အထူး စိတ်ဝင်စား စေမယ့် Camera apk ဖြစ်ပါ
တယ်။ သာမန်Camera apk တွေထက် အဆပေါင်း များစွာ သာပါတယ်။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရာတွင် ပေါ့ပါးမှု ရှိခြင်း ကြည်လင် ပြတ်သားမှု ထောက်ခံချက်
100% ပေးထား ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ပါဝင်လာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေကတော့ ဓာတ်ပုံ
များကို မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပုံများ စုစည်းပြီး အလှဆင်နိုင်ခြင်း မရည် မတွက် နိုင်တဲ့ ဘောင်အလှ
ဆင်မှု တွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ပြီးတော့ မီန်းကလေးများ အထူးကြိုက်နှစ်သက် စေမယ့် အမျိုးသမီး အလှဆင် ကိရီယာများပါ
ထည့်သွင်းပေးထားခြင်း ပြီးတော့ မလှတဲ့ လူတယောက် ကိုတောင် လှပနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရ
ကိုးရီးယား လူမျိုးတွေလို သင်လှပ ချင်ရင်တော့ ဒီ apk လေးကို ဆောင်ထားလိုက်ပါ။
Updated : February 9, 2015
Current Version : 3.5.4.3
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ zippyshare.com ▼
By : ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
Frpm : WWW.OOARKAR.COM
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, February 11, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Phone-Camera, Photo Software
Camera360 Ultimate v6.0.1
ကျွန်တော် တို့လို ရုပ်မလှတဲ့ သူတွေ ကိုတောင် ရုပ်လှ သွားအောင် ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ Camera 360
ခုလည်း ဇန်နဝါရီ 13 က update ထွက်ခဲ့တဲ့ Camera360 v6.0.1 လေးဖြစ်ပါတယ်။
file size 30.1MB ရှိပြီး android 2.3 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Camera360 သုံးသူများ update အသစ်ကို အောက်မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Camera360 v6.0.1 Updated
Updated : January 13, 2015
Current Version : 6.0.1
From : Pyae Phyo (MMiTD) by တိုးတိုး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, January 15, 2015 No comments:
၁ စက္ကန့်ကို ဓါတ်ပုံ ၃၀ ရိုက်ပေး နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Fast Burst Camera
Fast Burst Camera ဟာ ၁ စက္ကန့်ကို ဓါတ်ပုံ ၃၀ ရိုက်ပေး နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်.. လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေ
ကို အမြန်ဆုံး ရိုက်ချက်တွေနဲ့ အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံကို ဖန်တီး ရယူနိုင်ပါတယ်.. ဘောလုံးပွဲလို လှုပ်
ရားမှုမြန်တဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကိုတောင် ကြည်လင် ပြတ်သားအောင် ရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်..
ခုတင်ပေး လိုက်တာက နောက်ဆုံးထွက် Fast Burst Camera v6.0.5 Apk ဖြစ်ပါတယ်.. ။
Support for horizontal and vertical display
No more .tmb files
Updated : January 9, 2015
▼ play.google.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼ OR ▼ tusfiles.net ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, January 12, 2015 No comments:
ဖုန်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေ ရုပ်ထွက် ကောင်းကောင်း ရိုက်ယူနိုင်မဲ့ MagicPix Pro Camera HD v1.1 Apk
ဖုန်းမှာ ဓာတ်ပုံတွေ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်း ရိုက်ယူနိုင်မဲ့ MagicPix Pro Camera HD ဗားရှင်း အသစ် လေးပါ။
MagicPix Pro Camera HD v1.1 Apk |3MB | Resumable Links | Requires :Android 4.1 and Up |
From : အောင်ကျော်ခိုင်(ပုသိမ်) by Paye PhyoKyaw
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, December 19, 2014 No comments:
Magic Hour – Camera v1.3.25 Apk
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီး တင်ပေးမှာ ကတော့ အရမ်း hot တဲ့ Camera လေး တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေအတွက် လုံးဝ မပူပါနဲ့ ဦးလေးကြီး အခု တင်ပေးတဲ့ Camera က မှော်အစွမ်းနဲ့ ပြုလုပ်ပေး ထားတဲ့
apk လေးပါ။ အခု apk က လုံးဝ မဲသူ အတွက် အသားဖြူ လာစေပါတယ်။
၀တ်ခြံပေါက်လို့ စိတ် မပူပါနဲ့ 360 မလိုပါဘူး Magic Hour က သင့်ကို 360 ထက်ပိုပြီး လန်းအောင်လုပ်
ပေးလိုက်ပါမယ်။ ရုပ်ဆိုးရင်တော့ ရုပ်လှဖို့ သင့်အတွက် လှပအောင်လုပ်ဆောင်ချက် များစွာပါဝင်တယ်
နော်။ ရုပ်ချောတဲ့ သူများကျတော့ ပိုလှ သွားအောင် ထပ် ပြုပြင်နိုင်ပါသေးတယ်နော်။
အခု Magic Hour Camera Apk လေးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အလှအပ တရားတွေ သင့်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးလိုက်
▼ zippyshare ▼
From : Pyae Phyo (MMiTD) by ဦးအာကာ -ဦးလေးကြီး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, December 12, 2014 No comments:
အလန်းစား အမိုက်စား Effect တွေနဲ့ ရိုက်နိုင်တဲ့ - Camera FV-5 v2.30 APK
Android User တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်တင်ပေးမှာကတော့ Video ,Photo တွေကို Effect အလန်းစား အမိုက်
စားတွေနဲ့ ရိုက်နိုင် တဲ့ Cinema FV-5 ဆိုတဲ့ Application လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
တော်တော် များများ တင်ပေးနေ ကြ တာက Photo Camera တွေအတွက်ဘဲ တင်ပေးနေ ကြပြီး Video
Camera Application တင်တာနည်းလို့ Video ၀ါသနာပါသူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Video ရိုက်
ကူးရာမှာလည်း အလင်းအမှောင်နဲ့ Color များကို လိုအပ်သလို စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်။ Android OS 2.2နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ
File Size ကလည်3း.5MB လေးပဲရှိတာမို့ လိုအပ်ရင်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေါင်း ယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
▼ solidfiles ▼
From : Pyae Phyo (MMiTD) by Win Hlaing
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, December 09, 2014 No comments: